Ogaden News Agency (ONA) – Wadanka Koonfurta Sudan oo Dawlad Wadaag Ah Yeelan Doona.
Wadanka Koonfurta Sudan oo Dawlad Wadaag Ah Yeelan Doona.
Posted by Daljir	/ January 15, 2016
Dalka Koonfurta Sudan waxaa la filayaa in looga dhawaaqo dawlad wadaag ah oo mucaaradka iyo xukuumadii hore. Arinkani ayaa ka dambaysay kadib heshiiskii bishii 8aad lagu gaadhay magaaladda Addis-Ababa.
Riak Machar iyo madaxweyne Salva Kiir ayaa qaybsanayay xubnaha golaha wasiiradda uu ka kooban yahay. Wadanka Koonfurta Sudan mudo ayaa mudo dhowr sano ah waxaa ka socda dagaalo qabiili ah ooy dad badan ku dhinteen.
Qaybsiga dawladan wadaaga ah ayaa la filayaa inay soo afjarto colaadii taagnayd. Koonfurta Sudan waxay ka go’day dalwaynaha Sudan oo mudo dheer ay dagaalamayeen. Wadankan oo hodan ku ah Saliida caydhiin ayay dagaalo sokeeyo ragaadiyeen sanadihii lasoo dhaafay.